ठुला नेता भएको ठाँउ टुकर्यान नहुने अरु ठाँउलाई टुकर्यादै हिडने – YesKathmandu.com
सोमबार ०६, मङि्सर २०७३
हामीले दर्ता गर्ने भनेर गर्न र नगर्ने भनेर नगर्ने त होइन नि । औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्नुप¥यो । संशोधनका विषयहरु के के हुन एमालेसंग कुरा गर्नुप¥यो । नागरिकताको विषय के हो ? हामी सँग कुरा भएकै छैन । अङ्गीकृतलाई सबै पद दिने भन्ने हामी मान्दैनौ ।
नागरिकता र सिमाङ्कन भनेको सोलोडोलो भन्दिने ? के हो त्यो भनेको ? नागरिकताको समस्या के हो त्यो खुलाउनु प¥यो । आङ्गीकृतलाइ राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा हामी मान्दै मान्दैनौ ।
सीमाङ्कन एक ठाउमा चलाउदा २० ठाउबाट प्रतिकृया आउछ, शेरबहादुर देउवा अखण्ड सुदुरपश्चिम भन्दै हिडनु भएको छ । उहाँ कसरि संशोधनको पक्षमा ? ठुला नेता भएको ठाँउ टुकर्यान नहुने अरु ठाँउलाई टुकर्यादै हिडने ? यसरी हेप्नु त भएन नि । यसको औचित्य के ?
मोर्चामा थप तीन दल समेटिए
नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्न छुटेका सभासदले अन्तिम मौका पाउँने
देशभर बर्षा र हिमपात
अरुले पीठो बेचे,माओवादीले चामल बेच्न सकेन : प्रचण्ड